Akụkọ - Polyethylene ụfụfụ Gaskets jikọtara White Cross
White Cross-njikọ Polyethylene ụfụfụ Gaskets
Emechiri emechi cell cross njikọ polyethylene ụfụfụ nwere ike ịbụ otu n'ime ihe kacha mma ụfụfụ gasket ihe. Yefụfụ polyethylene nwere isi abụọ - kemịkalụ polyethylene na-ejikọta obe na irradiation na-ejikọta ụfụfụ polyethylene. Nke ikpeazụ na dị mma karịa ugboro ugboro etinyere dị ka ụfụfụ gasket maka ahịa gụnyere ọgwụ na ahụ ike, na kọmputa ngwaọrụ, ịchọ mma nkwakọ, akpakanamde mmiri, wdg.
Ngwunye polyethylene na-eme ka irradiation jikọtara irradiation nwere arụmọrụ dị mma na njirimara anụ ahụ.
Ezigbo obi nkasi obi na gburugburu ebe obibi enyi na enyi gụchara
Adịghị eguzogide mmiri, ihu igwe na mmanụ
Ezigbo mkpuchi ọkụ na nke mkpuchi
Ezigbo arụmọrụ elongation
A na-enweta ya n'ọtụtụ dịgasị iche iche na agba
Emechie sel Ọdịdị maka obere mmiri absorption na vepo nnyefe.
Ihe nkedo ikuku polyethylene foam nke jikwara irradiation nwere ihe ndi ozo. Oke ọkpụrụkpụ dị site na 0.08 mm ruo 8 mm. E nwere ike ịsị na ụyọkọ ụfụfụ dị ka ọfụma. Njupụta nwere ike ịdị site na 28 n'arọ / m³ ruo 300 kg / m³. Standard ụfụfụ agba na-acha ọcha na nwa. Enwere ike ịhazi agba ndị ọzọ gụnyere acha anụnụ anụnụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọbara ọbara, oroma na ihe ndị ọzọ.
Ahịa Ahịa - Fofụfụ Product Ngwa
ọcha bụ ụfụfụ gasket ihe onwunwe Lee bụ irradiation cross-njikọ polyethylene ụfụfụ gaskets anyị mepụtara maka anụ ụlọ anyị ahịa
ahịa. Ha ga-eji ihe eji emepụta ụfụfụ PE dị ka nkwonkwo nri maka akụkụ akụrụngwa ha. Ngwunye polyethylene ụfụfụ anyị na-ejikọta na cross na-arụ ọrụ dị ka akụkụ cushioning nakwa maka nkwụsi mmanụ na mmanụ. N'ihi ikike ha nwere nke ọma, ha na-arụ ọrụ nke ọma mgbe akụkụ moto ahụ na-arụ ọrụ.
Otu anyị si eme ụfụfụ ụfụfụ a
Ihe maka ụfụfụ ụfụfụ a bụ ikuku polyethylene na-ejikọta ikuku na irighiri mmiri na-agbasawanye ụfụfụ nke oge 15 na 65 kg / m³ nke njupụta. Igwe gaseti bụ 130 mm x 98 mm x 1 mm na ọnwụ ọnwụ.
1) mechiri emechi polyethylene ụfụfụ gasket ihe mbụ anyị kwesịrị iji gosi na ahịa na ngwaahịa CAD Eserese. Ngwaahịa CAD eserese ka mma ka ndị injinia si ndị ahịa nye ya. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ndị ahịa enweghị nkwado nkwado CAD, anyị nwere ike ịme akụkụ nke injinia maka ngwaahịa ndị ahịa.
2) Mgbe ị kwadochara ihe osise CAD nke ụfụfụ ụfụfụ, anyị ga-eme nchara ịnwụ ọnwụ dịka ihe osise egosipụtara. Ozugbo anwụ ọnwụ ebu njikere, anyị factory mkpara ga-eme ndokwa na uka mmepụta.
3) Maka ịgha ụgha nke ụfụfụ ụfụfụ a, anyị kwesịrị imezu usoro mmepụta dị n'okpuru:
Omenala ụfụfụ omenala
Foamfụfụ polyethylene mbụ bụ otu ụdị ụdị ihe eji emepụta ụfụfụ. Ha na-abịa na mpịakọta ọ bụghị na mpempe akwụkwọ, ndị ọrụ ụlọ ọrụ anyị ga-eji igwe ịkwa ahihia iji belata ha na mpempe akwụkwọ. Mpempe ụfụfụ polyethylene a na-egbutu ga-adịkarịa ala otu nha nke nchara ịnwụ anwụ ma ọ bụ karịa.
Gbanwee ndị na-egbutu ihe ma wụnye ihe na-egbu egbu iji bulie oke nkenke
Tupu imepụta ihe n'ezie, ndị injinia mmepụta anyị ga-eji nlezianya na-acha ọcha mechiri emechi polyethylene ụfụfụ gaskets wụnye ọnwu ịkpụ na-eme ka ọ dị mma yana ngwaọrụ ndị na-anwụ anwụ. Usoro a nke ịnwale ebu ahụ ga-efu oge karịa ka onye ahịa na-echekarị. Maka ihe ga-esi na ya pụta, anyị ga-eji ụfọdụ akụkụ nke ihe ụfụfụ iji hụ na arụnyere ígwè ahụ. Mgbe nke a gasịrị, enwere ike ịnwe ike ịwepụta ihe ọ ga-aga.
4) Akụkụ ikpeazụ anyị kwesịrị ime bụ nchịkọta omenala maka ngwaahịa ụfụfụ mechara tupu ebufere. Anyị ga-ebu ụfụfụ ụfụfụ maka njem ka mma. Omenala nkwakọ dị ka ibi akwụkwọ akwụkwọ igbe na poli akpa dị site anyị dabere na ahịa mkpa.
N'ihi na nke a Polyethylene ụfụfụ gaskets oru ngo n'okpuru a chọrọ